ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်... (အပိုင်း - ၄) - For her Myanmar
အဆိုးရွားဆုံး အပြစ်သည်ကား သူတို့နှစ်ယောက်ကြားတွင် တတိယလူ ဝင်လာသည့်ကိစ္စပင် ဖြစ်သည်။
ထားနှင့် အိမ်ထောင်ရေးဘဝဆက်ဆံရေးသည် အစပိုင်းတွင်တော့ ပျော်စရာ ကောင်းသည်ဟု သူထင်သည်။ နောက်ပိုင်းကာလများတွင် သူတို့နှစ်ဦးလုံး ပြောင်းလဲခြင်းများစွာနှင့် ပြောင်းလဲသွားကြသည်။
ပထမဆုံး ပြောင်းလဲသွားခြင်းသည် ထား ဟု သူထင်သည်။ ချောမွေ့နေသော ဆက်ဆံရေးမှာ ရုတ်တရက် ထားတစ်ယောက် သူ့အပေါ် အေးစက်စက် ဖြစ်သွားသည်။ သူ အနားကပ်ခြင်းကိုလည်း ထား လက်မခံချေ။ လင်ရယ် မယားရယ် ဖြစ်လာခဲ့ကြပေမဲ့ နှောင်းပိုင်းကာလများတွင် သူတို့နှစ်ယောက်အကြား လင်မယား အမှုရယ်လို့ မရှိကြတော့။ ထားဘက်က ကြည့်လျှင်လည်း သူသည် ပထမဆုံး ပြောင်းလဲသွားသူဟု မြင်ကောင်းမြင်နိုင်ပါသည်။ ထား ပြောင်းလဲသွားခြင်းသည် ခေတ္တခဏ ပြောင်းလဲခြင်းမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ထိုအတွက် သူ အဖြေမထုတ်ခဲ့။
Related Article >>> ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်…. (အပိုင်း – ၂)
လူသားဘဝ၌ လိင်ကိစ္စသည် ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ အရေးပါလဲ သူသေချာမသိ။ သို့သော် သူ့အနေနှင့် ထား ငြင်းဆိုသည့် အချိန်တိုင်းတွင် အကျပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။ စိတ်ညစ်ညူးရသည်။ ကြာလာသော အချိန် ကာလတစ်ခုတွင် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကိုပါ ရင်ဆိုင်လာရတော့သည်။
ထား သည် ကျန်သည့် မယားဝတ္တရားဟု ပြောရလောက်သော အိမ်မှုကိစ္စများ နှင့် သူ့အတွက် ဝတ္တရားများကိုတော့ ကျေပြွန်ပါသည်။ သို့သော် ဆက်ဆံရေးသည်ကား အေးမြဲအေးဆဲပင်။ ထို့အတွက် သူလည်း အိမ်ပြန်ရသည်ကို မပျော်မွေ့တော့။ ရုံးမှာပဲနေတော့သည်။ ရုံးမှာပဲ စားတော့သည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် တစ်ယောက်တည်း စားခဲ့ရသော ညစာတွေ များလာခဲ့သည်။
ထား တစ်ယောက် ပြောင်းလဲသွားခြင်း၏ အကြောင်းရင်းကို အဖြေမရှာနိုင်။ ပြဿနာတစ်ခုလို သတ်မှတ်ပြီး အဖြေမရှာခဲ့ခြင်းဆိုလျှင် သူ့အတွက် ပိုမှန်ပါလိမ့်မည်။
“သူတောင်မှနေနိုင်လို့ နေသေးတာပဲကွာ။ ငါက ပိုနေနိုင်တာပေါ့” ဟူသော မလိုအပ်သည့် ယောက်ျားမာနက ဝင်လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှ စပြီး ထားအပေါ် သူ အပြစ်တွေကျူးလွန်ခဲ့သည်။
အဆိုးရွားဆုံး အပြစ်သည်ကား သူတို့နှစ်ယောက်ကြားတွင် တတိယလူ ဝင်လာသည့်ကိစ္စပင် ဖြစ်သည်။ ဟုတ်သည်။ ထားနှင့် အဆင်မပြေသော နေ့ရက်များတွင် သူ့ကို ဂရုတစိုက်ရှိသော ရတနာဟုခေါ်သည့် ကောင်မလေးနှင့် ဖောက်ပြန်ခဲ့သည်။
ရတနာသည် သူ့ထက် ၁၀ နှစ်ခန့် ငယ်သည်။ ကျောင်းပြီးပြီးချင်း သူတို့ဆီ၌ အလုပ်ဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ငယ်တော့ လှသည်။ ခန္ဓာကိုယ်လေးသည်လည်း ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်ပင်။ အလုပ်စဝင်တည်းက ရတနာက သူ့ကို ဂရုစိုက်သည်။ သူ့အတွက် ဟင်းတွေ ချက်လာခဲ့ပေးသည်။ သူ့စားပွဲခုံများကို ရှင်းလင်းပေးသည်။
နောက် အနေချင်းလည်း နီးလာခဲ့ပြီး သူ အိမ်ပြန်သည့်အချိန်တိုင်းတွင် ရတနာသည် သူနှင့်အတူ ရှိနေခဲ့သည်။ သူ ပြန်မှ ရတနာ့ကို အဆောင်လိုက်ပို့ရသည်။ ၈ နာရီခွဲ ၉ နာရီသည် သူတို့နှစ်ယောက်လုံးအတွက် အစောဆုံး အိမ်ပြန်ချိန်ပင်။
အလုပ်မရှိသော နေ့ရက်များတွင် တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်ပြောပြရင်း သူတို့ကြား နားလည်မှုတစ်ခု ရှိလာသည်။ ဘယ်လို နားလည်မှုမျိုးဆိုတာ သေချာမသိပေမဲ့ သူ့အနေနှင့် ထားအပေါ်သစ္စာဖောက်ဖြစ်တော့မည့်အကြောင်းကိုတော့ အလိုလို သိနေခဲ့ပါသည်။
ခံတွင်းပျက်နေသော ကြောင်အတွက် ရတနာသည် တောင်ပံကျိုးနေသော ဆက်ရက် ဟုတ်မဟုတ်ဆိုသည်ကို သူ သေချာမသိပါ။ သို့သော် ရတနာသည် သူ့အလိုကို လိုက်လျောကာ သူနှင့်အတူ လိုက်အိပ်ခဲ့သည်။ အစိုးရဝန်ထမ်း တစ်ယောက်အတွက် လူမှုရေး ဖောက်ပြန်ခြင်းသည် ကြီးလေးသော ပြစ်မှုတစ်ခုမှန်း သူသိသည်။ သို့သော် အထိအတွေ့ကို မလွန်ဆန်နိုင်။ ထို အပြစ်အတွက်လည်း ထား နှင့် ပြန်ဆုံတွေ့ချိန်တွင် ဝန်ချ တောင်းပန်ရမည် ဖြစ်သည်။
သို့သော်.. သူ မည်သို့ပင် တောင်းပန်ချင်စေဦး.. လူ့လောကမှာ မရှိတော့သည့် ထားကို မည်သည့်နည်းသုံး၍ တောင်းပန်ရမည်နည်း။ မည်ကဲ့သို့ တောင်းပန်ရမည်နည်း။ ခုတော့ သူ အဘနဲ့ တွေ့ပြီး လမ်းစတစ်ခု ရခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထိုလမ်းက အလုပ်ဖြစ်၊မဖြစ် ဆိုသည်မှာတော့…
အဆိုးရှားဆုံး အပွဈသညျကား သူတို့နှဈယောကျကွားတှငျ တတိယလူ ဝငျလာသညျ့ကိစ်စပငျ ဖွဈသညျ။
ထားနှငျ့ အိမျထောငျရေးဘဝဆကျဆံရေးသညျ အစပိုငျးတှငျတော့ ပြျောစရာ ကောငျးသညျဟု သူထငျသညျ။ နောကျပိုငျးကာလမြားတှငျ သူတို့နှဈဦးလုံး ပွောငျးလဲခွငျးမြားစှာနှငျ့ ပွောငျးလဲသှားကွသညျ။
ပထမဆုံး ပွောငျးလဲသှားခွငျးသညျ ထား ဟု သူထငျသညျ။ ခြောမှနေ့သေော ဆကျဆံရေးမှာ ရုတျတရကျ ထားတဈယောကျ သူ့အပျေါ အေးစကျစကျ ဖွဈသှားသညျ။ သူ အနားကပျခွငျးကိုလညျး ထား လကျမခံခြေ။ လငျရယျ မယားရယျ ဖွဈလာခဲ့ကွပမေဲ့ နှောငျးပိုငျးကာလမြားတှငျ သူတို့နှဈယောကျအကွား လငျမယား အမှုရယျလို့ မရှိကွတော့။ ထားဘကျက ကွညျ့လြှငျလညျး သူသညျ ပထမဆုံး ပွောငျးလဲသှားသူဟု မွငျကောငျးမွငျနိုငျပါသညျ။ ထား ပွောငျးလဲသှားခွငျးသညျ ခတ်ေတခဏ ပွောငျးလဲခွငျးမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျပမေဲ့ ထိုအတှကျ သူ အဖွမေထုတျခဲ့။
Related Article >>> ပွနျဆုံဖွဈခဲ့ရငျ…. (အပိုငျး – ၂)
လူသားဘဝ၌ လိငျကိစ်စသညျ ဘယျလောကျအတိုငျးအတာထိ အရေးပါလဲ သူသခြောမသိ။ သို့သျော သူ့အနနှေငျ့ ထား ငွငျးဆိုသညျ့ အခြိနျတိုငျးတှငျ အကပျြအတညျးနှငျ့ ရငျဆိုငျရသညျ။ စိတျညဈညူးရသညျ။ ကွာလာသော အခြိနျ ကာလတဈခုတှငျ စိတျဓာတျကခြွငျးကိုပါ ရငျဆိုငျလာရတော့သညျ။
ထား သညျ ကနျြသညျ့ မယားဝတ်တရားဟု ပွောရလောကျသော အိမျမှုကိစ်စမြား နှငျ့ သူ့အတှကျ ဝတ်တရားမြားကိုတော့ ကပြွှေနျပါသညျ။ သို့သျော ဆကျဆံရေးသညျကား အေးမွဲအေးဆဲပငျ။ ထို့အတှကျ သူလညျး အိမျပွနျရသညျကို မပြျောမှတေ့ော့။ ရုံးမှာပဲနတေော့သညျ။ ရုံးမှာပဲ စားတော့သညျ။ တဖွညျးဖွညျးနှငျ့ တဈယောကျတညျး စားခဲ့ရသော ညစာတှေ မြားလာခဲ့သညျ။
ထား တဈယောကျ ပွောငျးလဲသှားခွငျး၏ အကွောငျးရငျးကို အဖွမေရှာနိုငျ။ ပွဿနာတဈခုလို သတျမှတျပွီး အဖွမေရှာခဲ့ခွငျးဆိုလြှငျ သူ့အတှကျ ပိုမှနျပါလိမျ့မညျ။
“သူတောငျမှနနေိုငျလို့ နသေေးတာပဲကှာ။ ငါက ပိုနနေိုငျတာပေါ့” ဟူသော မလိုအပျသညျ့ ယောကျြားမာနက ဝငျလာခဲ့သညျ။ ထိုအခြိနျမှ စပွီး ထားအပျေါ သူ အပွဈတှကြေူးလှနျခဲ့သညျ။
အဆိုးရှားဆုံး အပွဈသညျကား သူတို့နှဈယောကျကွားတှငျ တတိယလူ ဝငျလာသညျ့ကိစ်စပငျ ဖွဈသညျ။ ဟုတျသညျ။ ထားနှငျ့ အဆငျမပွသေော နရေ့ကျမြားတှငျ သူ့ကို ဂရုတစိုကျရှိသော ရတနာဟုချေါသညျ့ ကောငျမလေးနှငျ့ ဖောကျပွနျခဲ့သညျ။
ရတနာသညျ သူ့ထကျ ၁၀ နှဈခနျ့ ငယျသညျ။ ကြောငျးပွီးပွီးခငျြး သူတို့ဆီ၌ အလုပျဝငျလာခွငျးဖွဈသညျ။ ငယျတော့ လှသညျ။ ခန်ဓာကိုယျလေးသညျလညျး ပွဈမြိုးမှဲ့မထငျပငျ။ အလုပျစဝငျတညျးက ရတနာက သူ့ကို ဂရုစိုကျသညျ။ သူ့အတှကျ ဟငျးတှေ ခကျြလာခဲ့ပေးသညျ။ သူ့စားပှဲခုံမြားကို ရှငျးလငျးပေးသညျ။
နောကျ အနခေငျြးလညျး နီးလာခဲ့ပွီး သူ အိမျပွနျသညျ့အခြိနျတိုငျးတှငျ ရတနာသညျ သူနှငျ့အတူ ရှိနခေဲ့သညျ။ သူ ပွနျမှ ရတနာ့ကို အဆောငျလိုကျပို့ရသညျ။ ၈ နာရီခှဲ ၉ နာရီသညျ သူတို့နှဈယောကျလုံးအတှကျ အစောဆုံး အိမျပွနျခြိနျပငျ။
အလုပျမရှိသော နရေ့ကျမြားတှငျ တဈယောကျအကွောငျး တဈယောကျပွောပွရငျး သူတို့ကွား နားလညျမှုတဈခု ရှိလာသညျ။ ဘယျလို နားလညျမှုမြိုးဆိုတာ သခြောမသိပမေဲ့ သူ့အနနှေငျ့ ထားအပျေါသစ်စာဖောကျဖွဈတော့မညျ့အကွောငျးကိုတော့ အလိုလို သိနခေဲ့ပါသညျ။
ခံတှငျးပကျြနသေော ကွောငျအတှကျ ရတနာသညျ တောငျပံကြိုးနသေော ဆကျရကျ ဟုတျမဟုတျဆိုသညျကို သူ သခြောမသိပါ။ သို့သျော ရတနာသညျ သူ့အလိုကို လိုကျလြောကာ သူနှငျ့အတူ လိုကျအိပျခဲ့သညျ။ အစိုးရဝနျထမျး တဈယောကျအတှကျ လူမှုရေး ဖောကျပွနျခွငျးသညျ ကွီးလေးသော ပွဈမှုတဈခုမှနျး သူသိသညျ။ သို့သျော အထိအတှကေို့ မလှနျဆနျနိုငျ။ ထို အပွဈအတှကျလညျး ထား နှငျ့ ပွနျဆုံတှခြေိ့နျတှငျ ဝနျခြ တောငျးပနျရမညျ ဖွဈသညျ။
သို့သျော.. သူ မညျသို့ပငျ တောငျးပနျခငျြစဦေး.. လူ့လောကမှာ မရှိတော့သညျ့ ထားကို မညျသညျ့နညျးသုံး၍ တောငျးပနျရမညျနညျး။ မညျကဲ့သို့ တောငျးပနျရမညျနညျး။ ခုတော့ သူ အဘနဲ့ တှပွေီ့း လမျးစတဈခု ရခဲ့ပွီဖွဈသညျ။ ထိုလမျးက အလုပျဖွဈ၊မဖွဈ ဆိုသညျမှာတော့…
Tags: Couple, Fiction Series, Fun, love, series, Third person, Time
Moe December 24, 2018